China Mig ịgbado ọkụ Robot Manufacturer na Supplier | Yunhua
Ngwongwo Robotic Metal Inert Gas (MIG), nke a makwaara dị ka Gas Metal Arc Welding (GMAW), bụ usoro nkwụnye ego a na-ahụkarị nke gụnyere itinye nri waya na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ. Ọ na-ahụta a ọkara akpaka ịgbado ọkụ usoro.
MIG ịgbado ọkụ bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu na ịgbado ọkụ na ngwa ọrụ ụlọ ọrụ yana ọ bụ usoro dị mfe iji tinye aka na sistemụ robot. MIG ịgbado ọkụ na-enye usoro ọsọ ọsọ karịa ụdị ndị ọzọ nke ịgbado ọkụ, karịsịa mgbe a na-etinye robot.
MIG ịgbado ọkụ robots nwere ikike nke ọnọdụ niile, na-agbakwunye mgbanwe na sistemụ ịgbado ọkụ. Nchebe site na anwụrụ ọkụ dị egwu, welds dị elu na usoro ịrụ ọrụ nke ọma bụ ụfọdụ n'ime uru ndị ụlọ ọrụ na-ahụ na-eso MIG ịgbado ọkụ.
Ọrụ maka isi iyi ike MIG
YOO obi robot jikọọ dị iche iche ika welder, Chinese ika: Aotai, Megmeet, Bingo, wdg. N'ime oké osimiri ama ika: OTC, EWM wdg. Na Chinese ika welder, were Aotai ka ihe atụ, i nwere ike Weld a otutu dị iche iche ihe dị ka carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara na aluminom, na usu ọrụ, ala spatters ọrụ na na. Site na ndị ọkachamara ahụmịhe, Aotai welder na YOO HEART robot ugbu a nwere ike izute min 0.5mm CS plate welding with super good performance.
Companylọ ọrụ Yunhua nwere ike inye ndị ahịa okwu dị iche iche nke nnyefe. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụzọ ụgbọ mmiri site n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku dị ka mkpa ngwa ngwa. Okwu nkwupute YOO nwere ike izute oke osimiri na ikuku chọrọ. Anyị ga-akwadebe faịlụ niile dị ka PL, akwụkwọ asambodo, akwụkwọ ọnụahịa na faịlụ ndị ọzọ. Enwere onye ọrụ nke ọrụ ya bụ ijide n'aka na a ga-ebute robot ọ bụla n'ọdụ ụgbọ mmiri omenala na-enweghị nsogbu na ụbọchị 40.
Q1. Enwere ike iji robot ịgbanye Mig maka ịgbado ọkụ Aluminium?
A. Mig ịgbado ọkụ robot nwere ike iji maka Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, Aluminom ịgbado ọkụ. Ihe dị iche bụ robot ga-ahazi welder dị iche iche iji zute ihe dị iche iche.
Q2. Nwere ike ịgbanye robot jikọọ ọzọ?
A. Mig ịgbado ọkụ robot nwere ike ijikọ dị iche iche ika welder dị ka OTC, Lincoln, Aotai, Megmeet wdg Megmeet & Aotai bụ mmekọrịta anyị ika, nke mere na ihe niile mbụ jikọọ welder bụ Megmeet / Aotai. Ndị ahịa ga-eme ya n'onwe ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ welder ọzọ.
Q3. Nwere ike ịgbado ọkụ robot jikọọ axis?
A. Mig ịgbado ọkụ robot ike ijikọ mpụga axis. 3 ọzọ mpụga axis nwere ike jikọọ na ndị a axises nwere ike synergy na robot. Enwere ike ijikọ ọtụtụ axis site na PLC, robot ga-achịkwa ha site na izipu na ịnweta akara site na bọọdụ I / O.
Q4. ọ dị mfe ịmụta robot mmemme?
A, dị mfe ịmụ, naanị mkpa ụbọchị 3 ~ 5, onye ọrụ ọhụụ nwere ike ịma etu esi eme robot.
Q5. Nwere ike ịnye ngwongwo ịgbado ọkụ Mig zuru ezu?
A. ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye nkọwa gbasara mpempe akwụkwọ ọrụ, onye ọrụ anyị nwere ike ịmepụta azịza zuru oke maka gị. Anyị ga-akwụ ụgwọ 1000 USD maka nhazi ọ bụla.
Nke gara aga: TIG ịgbado ọkụ Robot
Osote: Laser ịgbado ọkụ robot